CTO: Ny lova navelan'i Gordon "Butch" Stewart dia hamolavola ny taranaka ho avy
Home » Vaovao Karaiba » CTO: Ny lova navelan'i Gordon “Butch” Stewart dia hamolavola ny taranaka ho avy
Miaraka amin'ny alahelo lehibe ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia nahalala ny fahafatesan'ny sary famantarana ny fandraisam-bahiny Jamaikana sy Karaiba, Gordon "Butch" Stewart. Ireo firenena mpikambana ao amin'ny CTO, mpikambana sy mpiasa mpiara-miasa dia manatevin-daharana ny governemanta sy ny olona ao Jamaika, ny fianakaviana Stewart, ny fianakavian'i Sandals, ary ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahantany ary ny fandraisam-bahiny amin'ny fisaonana azy.
Andriamatoa Stewart dia mpanompo mahatoky sy be zotom-po amin'ny fizahan-tany any Karaiba nandritra ny efa-polo taona ary ny fanolorany tena dia naseho tamin'ny alàlan'ny zava-bita miavaka maro. Izy dia nandritra ny androm-piainany feno fahombiazana, fanoloran-tena ho an'ny firenena sy Karaiba ary fanoloran-tena ho mendrika amin'ny sehatry ny fandraisana vahiny.
Raha hiresaka momba ny zanany lahy, Adam, Andriamatoa Stewart dia "mpandraharaha manana talenta", "genius marketing", ary "mpanonofy afaka manonofy lehibe sy tsara noho ny olon-drehetra." Tsy misy porofo lehibe noho an'io noho ny fahombiazany amin'ny maha mpanorina sy mpitarika ny marika amoron-dranomasina Sandal sy Beaches malaza eto an-tany, miaraka amin'ireo fanavaozana nentiny tamin'ireo marika ireo.
Andriamatoa Stewart dia mpanolo-tsaina ny maro, ary ny fandraisany anjara dia nanohina saika ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamonina Jamaikana sy Karaiba. Ny fahafatesany dia fatiantoka lehibe ho an'ny faritra iray manontolo. Izy dia mpizahatany sy fizahantany ary raharaham-barotra marina ary ny lovany dia hamolavola ny taranaka ho avy.Nyawang
COMAC: Firaketana ny fiaramanidina 24 ARJ21 nalefa tamin'ny 2020